Achọpụtara ahụhụ Apple Pay na kaadị Visa na ịkwụ ụgwọ mbupu | Esi m na mac
Ha na -achọpụta njehie nke Apple Pay na kaadị Visa na ịkwụ ụgwọ mbupu
Anyị amaralarị na Apple Pay na -enwekarị nkwekọrịta Visa, MasterCard, na American Express. Mana ọ dị ka otu n'ime ha nwere nsogbu ọzọ. Karịsịa na Visa. Otu ndị nyocha nọ na UK achọpụtala nsogbu nchekwa metụtara kaadị Visa na Apple Pay nke ahụ nwere ike ime ka ndị mwakpo gafee ihuenyo mkpọchi wee kwụọ ụgwọ wayo.
Dabere na nyocha ahụ, nke ndị nyocha Britain ahụ (Andreea-Ina Radu, Tom Chothia, Christopher JP Newton, Ioana Boureanu na Liqun Chen mere), ọdịda ahụ na-eme mgbe kaadị Visa. na -ahazi na Apple's Express Transit mode (Kwụọ ụgwọ ngwa ngwa maka njem ụgbọ ala site na iji kredit, debit ma ọ bụ kaadị mbufe na -emepeghị ngwaọrụ gị.) Ọkụ a nwere ike ikwe ka ndị na -awakpo gafee ihuenyo mkpọchi nke ọdụ ụgbọ ala wee kwụọ ụgwọ na -enweghị kọntaktị na -enweghị passcode. Ndị ọrụ nyocha na -ekwu na adịghị ike na -emetụta kaadị Visa echekwara na obere akpa. Ihe kpatara ya bụ koodu pụrụ iche nke ọnụ ụzọ gafere site na ya nke anyị ga -agafe iji jide njem.
Ndị ọrụ nyocha ahụ malitere azụmahịa wee nwalee echiche ha. Site n'iji ngwa redio nkịtị, ha nwere ike mee mwakpo ma ghọgbuo ọdụ ụgbọ ahụ na -eche na ọ dị n'ọnụ ụzọ mbata. Mwakpo nke ihe onyonyo metụtara iPhone. Agbanyeghị, mwakpo yiri ya ọ nwere ike imetụta ngwaọrụ ọ bụla nwere Apple Pay.
Otú ọ dị. Mmetụta a adịghị arụ ọrụ n'ime ụwa n'ezie. Na -eche na onye mwakpo wakporo mụ na ọnụ m, ha agaghị enwe ike imefu oke ego na ụzọ a. Ebe ọ bụ na emebere ya maka ịkwụ ụgwọ kwụrụ ụgwọ n'ụzọ na -abụghị maka ịkwụ ụgwọ azụmaahịa ebe ihe nchekwa dị ukwuu yana onye ọrụ chọrọ ihe ndị ọzọ.
Otú ọ dị, ọ na -adị mma mgbe niile ka achọpụta ihe adịghị ike iji nwee ike imeziwanye ma sie ike.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Ngwaahịa Apple » Apple Ṅaa » Ha na -achọpụta njehie nke Apple Pay na kaadị Visa na ịkwụ ụgwọ mbupu
October 28 Q4 nsonaazụ ego
Amalitere usoro 133 nke Safari Technology Preview